दैनिक ओखर खानाले शरिरलाई मिल्नेछ यति धेरै नसाेचेका १७ फाइदाहरु ! जानीराखौं – Annapurna Daily
On Sep 18, 2021 752
एजेन्सी, ‘ब्रेन फुड’ अर्थात ओखरको सेवनले मस्तिष्कको विकाससहित यसलाई स्वस्थ्य राख्न सघाउ पुर्याउँछ । ओखरमा पाइने प्रचुर मात्राको पोषक तत्वले छाला र कपालसमेत मुलायम एवम् चम्किलो बनाउँछ ।
के पाइन्छ त ओखरमा ? ओखरमा भरपुर मात्रामा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड हुन्छ । साथै यसमा भिटामिन ए, बि६, बि१२, सि, डि, इ र के पाइन्छ । यो प्रोटिनको पनि राम्रो स्रोत हो । यसका साथै क्याल्सियम, मिनरल्स, म्यानेसियम, आइरन, फस्फोरस, जिंक, कपर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसमा सोडियम कम र कालोस्टर पटक्कै हुँदैन । यो एन्टिअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो । ओखर किन खाने त, जान्नुहाेस् ?